Taliyihii saldhiga booliiska Xamar Weyne oo laxiray | Wardoon
Home Somali News Taliyihii saldhiga booliiska Xamar Weyne oo laxiray
Warar lagu kalsoonaan karo oo Wardoon heshay ayaa sheegaya in xabsiga la dhigay taliyihii saldhiga booliiska degmada Xamar Weyn ee gobolka Banaadir Gaashaanle Dhaxe Siciid Cumar .
Xariga taliyaha ayaa la sheegay in salka ku heyso qaraxiii xooganaa ee shalay ka dhacay Baar ku dhaw Xarunta Ganacsiga ee Miuqdisho Mall sidoo kale aan ka fogeyn saldhiga booliiska Xamar Weyne.
Xarunta dambi baarista CID-da ayaa la sheegay in lagu xiray taliyaha iyo ciidamo kale oo katirsanaa booliiska saldhiga Xamar Weyne, waxaana wax laga weediinayaa sida gaariga qarxay ugu gudbay koontarool laga galo goobta uu qarxa ka dhacay.
Dowlada Soomaaliya ayaa marar badan xirtay saraakiil iyo ciidamo katirsan booliiska Nabad sugida oo lagu eedeeyay in ay kasoo bixi waayeen shaqadii laga rabay halka kuwa kalana lagu tuhmay in ay fududeeyeen qaraxyo dhacay.
Previous articleTarsan “Qaramada Midoobay cunaqabataynta hubka hanaga qaaddo ”
Next articleDaawo: Ciidamo hubaysan oo l wareegay Xarunta Baarlamaanka Hirshabeelle
Ciidamada DF oo la wareegay Daljirka dahsoon +SAWIRRO
Guddiga Shirweynaha Dib u Heshiisiinta Galmudug oo la magacaabay